Wararkii Ugu Dambeeyay Dagaalka Dib Kaga Qarxay Gaalkacyo. – Bogga Calamada.com
Wararkii Ugu Dambeeyay Dagaalka Dib Kaga Qarxay Gaalkacyo.
Magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobalka Mudug waxaa saacadihii lasoo dhaafay dib kaga qarxay dagaal culus oo u dhaxeeya maleeshiyaatka maamulada gaala raacyada Galmudug iyo Puntland.
Dagaalka maanta ka qarxay dhanka Galbeed ee magaalada waxey labada maleeshiya isku adeegsadeen hubka culus sida madaafiicda oo ay ku kala garaaceen xaafadaha dhanka Waqooyi iyo Konfur oo labada maamul ay ka kala arimiyaan.
Si rasmi ah looma xaqiijin karo khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca ee maleeshiyaatka ay dhex-dooda is gaarsiiyeen iyadoona dadka shacabka maalmo ka hor ay isaga barakaceen xaafadaha labada dhinac ee magaaladaasi.
Maalmihii u dambeeyay waxaa dhanka Galbeed ee magaalada Gaalkacyo isku hor-fadhiyay maleeshiyaatka maamulada u adeega Xabashida Itoobiya ee kala ah Puntland iyo Galmudug.
Wazaaradda Arimaha dibada dowlada Xabashida Itoobiya ayaa kal hore sheegtay iney xalisay colaadaha ka taagan magaalada Gaalkacyo balse arintaasi waxaa gabi ahaan beeniyay xubno u kala hadlay labada maamul ee ku dagaalamaya magaalada Gaalkacyo.